अनसब्सक्र्राइबर, स्पाम हटाउन सब भन्दा सजिलो तरीका | ग्याजेट समाचार
तपाईं पहिलो वा अन्तिम हुनुहुन्न प्रत्येक दिन तपाईंको ईमेल खाता इनबक्स पूर्ण स्प्यामले भरिएको छ। विशाल बहुमत सदस्यताहरूको एक एकदम महत्त्वपूर्ण संग्रह हो जुन तपाईंले बर्षौं बर्ष स collecting्कलन गरिरहनु भएको थियो र अहिले तपाईं तिनीहरू मध्ये हरेकबाट सदस्यता लिन धेरै अल्छी हुनुहुनेछ। हामीले त्यसलाई तपाईमा राख्यौं अनसब्स्क्राइबर सेवाको साथ सजिलो.
अनसब्सक्र्राइबर एक सेवा हो जुन यो तपाइँको तपाइँको दैनिक उत्पादकता मा मद्दत गर्दछ। किन? किनकि तपाईलाई अब ईमेल जाँच गर्न र मेसेजहरू मेटाउन को लागी समयको आवश्यक पर्दैन जुन तपाईलाई मनपर्दैन यस विशेष सेवाले प्रमुख ईमेल प्रदायकहरूको साथ काम गर्दछ। र यसको अपरेशन ज्यादै सरल छ।
हामीले माथि उल्लेख गरेझैं अनसब्सक्र्राइबर मुख्य कम्पनीहरूसँग काम गर्दछ जसले तिनीहरूको ईमेल सेवा प्रस्ताव गर्दछ: गुगल र तपाईंको जीमेल; याहू! र तपाईंको याहू! मेल माईक्रोसफ्ट र यसको आउटलुक; साथै Comcast, COX, AOL र टाइम वार्नरसँग मिल्दो छ। यो काम गर्न को लागी कुरा सरल छ। एकचोटि तपाईको होम पेज प्रविष्ट गर्नुभयो भने, अनसब्सक्र्राइबरले तपाईंलाई एक ईमेल प्रदायकको साथ लग इन गर्न सोध्नेछ।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो ईमेल खाता प्रविष्ट गर्नुभयो जुन तपाईं यो सेवा लिंक गर्न चाहानुहुन्छ, अनसब्सक्र्राइबरले तपाईंलाई सूचित गर्नेछ यदि तपाईं आफ्नो ईमेलहरूमा पहुँच दिन चाहनुहुन्छ भने। साथै, तपाइँ अघि जानु अघि, तपाइँलाई भन्नुहोस् सेवा नि: शुल्क हो, तर यसले व्यवसायिक ईमेलबाट डाटा बचत गर्दछ जुन तपाईं मार्केटिंग उद्देश्यका लागि प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्योले भन्यो, सर्तहरू स्वीकार गरेपछि, र तपाईंको ईमेल पढ्न र समीक्षा गर्न अनुमति दिए पछि, तपाईंको इनबक्समा नयाँ सेक्सन थप गरिनेछ।
दाहिने तिर तपाईंसँग अब सेक्शन हुनेछ अनसब्सक्र्राइबर। यो त्यहाँ हुनेछ जहाँ तपाईं स्प्याम ड्र्याग र ड्रप गर्नुपर्नेछ र जहाँ उनीहरूले तपाईंलाई ती कष्टप्रद सदस्यताबाट सदस्यता समाप्त गर्नका लागि हेरचाह गर्नेछन्। डिस्चार्ज केहि दिन लिन सक्दछ। तर चिन्ता नलिनुहोस्, जब यो प्रक्रिया खुल्ला हुन्छ, तपाईं त्यो खाता [s] बाट प्राप्त गर्नुहुने सबै ईमेलहरू स्वत: नयाँ सेक्सनमा भण्डार हुनेछन्, जुन अनसब्स्क्राइबरका लागि जिम्मेवार छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » अनसब्सक्र्राइबर, स्पाम हटाउन सब भन्दा सजिलो तरीका
SoundPeats Q30, हामी कम लागत मूल्यमा शीर्ष अडियोको विश्लेषण गर्दछौं